Kenya Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Kenya'
Dagaal saf ballaaran ah ayay Dagaalyahanada Al Shabaab xalay ku qaadeen Xereda ay ku suganyihiin Ciidamada Militariga Kenya ku leeyihiin Deegaanka Kulbiyow ee Gobolka Jubbada Hoose. Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa xilligii afurka ka dib dhinaca bari ka soo weeraray Xerada Ciidamada Kenya, Dagaalkan oo mudo hal saac ah socday ka dib, ayaa waxaa xoogii shabaabka …
Al Shabaab oo soo Babdhigay Askari kale oo ay Dagaalkii Ceel Cade ku Qabteen (VIDEO)
Ururka Al Shabaab ayaa soo bandhigay Muuqaal laga soo duubay Askari Kenyan ah oo lagu qabtay weerarkii Shabaabku sanadkii hore ay ku qaadeen fariisin ay Ciidanka Kenya ku lahaayeen degaanka Ceel-cade ee Gobolka Gedo. Askarigan ay soo bandhigeen oo lagu magacaabo Alfred Danyi Kilasi, ayaa ka codsaday Madaxda iyo shacabka Kenya in ay u midoobaan …
Dagaalyahanno katirsan ururka Al Shabaab ayaa la soo sheegayaa inay xalay weerar khasaaro gaystay ay ka fuliyeen Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaar ahaan tuulo u dhaw Magaalada Mandheera. Ururka Al Shabaab ayaa weeraray deegaanka Cumar Jilacoow oo ku dhaw Magaalada Mandhera, waxayna halkaasi ku dileen askar ka tirsan ciidamada Kenya. Weerarkan oo dhacay …